Corn ငါးမျက်စိ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
(၁) ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော်က စစ်ကိုင်းတိုင်း၊့့ မှ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်က ၂၄ နှစ်ပါ။ ကျွန်တော်ရဲ့ လက်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က ငါးမျက်စိ တစ်လုံးထွက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီ ငါးမျက်စိကိုတော့ မြန်မာဆေးဖြစ်တဲ့ စိန်ငါးလုံးဆေးနဲ့ ငါးမျက်စိကို အပ်နဲ့ဆွပြီး သွေးစို့ လာတဲ့အခါ တို့ပြီး လိမ်းပေးပါတယ်။ ဆေးက အက်စစ် ပျော့ ပါတော့ အထဲထိ လှိုက့့်
(၂) ကျွန်မချစ်သူခြေထောက်မှာ ငါးမျက်စိအဖုလေး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဆေးစားလို့ရလား။ သူကတော့ ခွဲရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲဆိုတာရယ်။ ဘယ်လိုသတိပြု နေထိုင်သင့်တယ် ဆိုတာပြောပြပေးပါရှင့်။
ဟုတ်တယ် ငါးမျက်စိကလူတော်တော်များများ ဖြစ်ကြတယ်။ မနေ့ကတောင် ဆရာ့ဆေးခန်းလာပြတာ ၂ ယောက် ရှိတယ်။ ခွဲဘို့ ရက်ချိန်းပေးလိုက်ရတယ်။
Corns and Callus လို့ အလွယ် ခေါ်တယ်။ ဆေးစာလို Hyperkeratosis, Clavus, Heloma and Tyloma လို့ခေါ်တယ်။ Wart ကြွက်နို့နဲ့ ခွဲခြားသိရမယ်။ ကုရတာခြင်းမတူဘူး။
ကြာတော့ ပိုပိုနာလာမယ်။ အရေပြားအောက်က တစ်ရှူးတွေထိ ရောက်ရင် ပိုဆိုးတာပေါ့။ ကြာရင် ကိုယ့်ခန္ဓာက သူ့ကို Foreign body လို သတ်မှတ်လာတတ်တယ်။ ပိုးဝင်လာတတ်သေးတယ်။ ဆီးချိုရှိရင် ပိုဆိုးတယ်။
Corn paint, cure or plasters တွေက ယာယီသဘော နည်းနည်းသက်သာစေရုံသာ လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ဖြတ်လှီးတာက အန္တရာယ်မကင်းပါ။ Salicylic acid ပါတဲ့ဆေးလိမ်းကြတယ်။ Filing လက်သည်း-ခြေသည်းသုံးတံစဉ်း (ကျားလျှာမျိုး) နဲ့ တိုက်တယ်။ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ ဖိနပ်စီးပါ။ ခြေ-လက် သန့်ရှင်းရေးဂရုစိုက်ပါ။ Tincture of cannabis ဆေးခြောက်ကိုဖျော်ပြီးဆေးဖေါ်တာကိုအခုတော့ တားထားတယ်။
Plantar Warts ခြေဖဝါး အသားမာ
1. Condyloma acuminate လိင်လမ်းကြွက်နို့ ကုသနည်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/condyloma-acuminate.html
2. Genital warts in women အမျိုးသမီးလိင်လမ်းကြွက်နို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/genital-warts-in-women.html
3. Genital warts လိင်လမ်းကြွက်နို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/genital-warts.html
4. Plantar Warts Treatment ခြေဖဝါး အသားမာ ကုသနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/plantar-warts-treatment_22.html
5. Warts ကြွက်နို့ (သို့) သတ်ပုံမှားမေးခွန်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/warts.html
6. Warts ကြွက်နို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/warts.html
နောက်ဆုံးခွဲစိတ်ရမှာပါဘဲ။ ထုံဆေးနဲ့ခွဲတာပါ။ ပြန်တောင်မချုပ်ရဘူး။ အသားနုတက်ပြီးပျောက်သွားတာပါဘဲ။